Mana Kireffachu -- Odeeffanno Namoota Mana Kiressani fi mana Kireffatan garggaaru Afan Oromotiin
Mana kireffachuun waan nama dhibu fi nama wareerssu tokko. Unkkaan kun akka adeemsi kun salphatu odeeffanno namoota mana kiressan fi mana kireffattan garggaaru qaba. Walqquunamsiftuun asi gad jiru unkka ibssame kana akka arggattan isin garggaara.
Waligaltee mana kireffataniin fakkenya isa – Waligalteen kun namooni mana kiressan yero baayye waan nama gaafatan calaqqisa
Manat Godanu/Mana Keessa Godanu Tartiiba Ittiin tohataniin – Tartibi kun oso nami mana kireeffate mana keessa ingodaniin durat rakko mana keessa jiru akka baru dandda’an namota mana kireffatani fi namoota mana kireessan ni garggaara. Kun qarshi qabsiifame ilalchise waldhaba dhufu dandda’u ittisuuf ni garggaara.
Qarshi Qabsiisan Ilalchise Sagantta Yeroo – Namooni mana kiressan baaayyen isani akka qarshiin qabsiifamu ni gaafatu. Gami adeemsa kana ka adda adda yeroon inni itti tahu unkkan kun gorssa ni kenna.
Midha Mana irrat Dhaqqabee fi Dullumma Mana ilalchise qajeelcha – Yero waligalteen kira dhumee, nami kirefatu mana keessa bahu, nami mana kireeffate mana irrat miidha yo dhaqqabsse, nami mana kireeffate qarshi qabssiifame deebisu didduuf mirgga qaba. Maal akka "Dullumma Mana" yk "miidha mana irrat dhaqqabe" akka tahe unkkaan kun odeeffanno isin garggaaru isini kenna.
Namooni Mana Kireeffatan Akka Mani Kabamu Yo Gaafatan – Korbbo kanaan fayyadamuun nomooni mana kireeffatan, akka nami mana kireessef yo barbbachise mana kabuf gaafachu ni dandda’u.
Nama Mana Kiressu- Nama Mana Kireeffatu Ilalchise Seerota Hundde Tahan ka Seattle – Magala Seattle Keessat, Seeri Nama Mana Kiressu fi Nama Mana Kireeffatu ilalu ni jira. Unkkan kun seeera sun ni ibssa.
Page Loaded: 12/18/18 08:06 (Pacific Time) - Version 4.0